Kedụ ka ị ga - esi zụta cryptocurrencies n’enweghị nsogbu - Cazoo
Kedụ ka ị ga - esi azụta cryptocurrencies n’enweghị nsogbu?
Mbido » Mbido » Kedụ ka ị ga - esi azụta cryptocurrencies n’enweghị nsogbu?
Tag: igodo onwe, zụta cryptocurrencies, zụta cryptocurrencies n'enweghị nsogbu, Pọtụfoliyo nlekota, Pọtụfoliyo rebalancing, mkpụrụ okwu, atụmatụ ntinye ego, obere akpa
Oge ogugu: 3 minuti
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-agụ m, biko! Ma ọ bụ ịnabata, dị ka omume nke ndị inyom na-etinye ego na-eto eto. 👩
N'ebe a na Cazoo ị degaara Cazoo, enyi m nke m na-ekerịta ihe edeturu nke nyocha m n'ime ụwa gigantic bụ ụwa nke cryptocurrencies. Na peeji nke 1 nke akwụkwọ ndekọ a, enwere ajụjụ bụ: otu esi azụta cryptocurrencies n’enweghị nsogbu?
Achọpụtara m ụwa nke cryptocurrencies dị oke mma maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Intobanye n'ime ndị meanders na usoro ya adịghị mfe, site n'echiche ụfọdụ ọ chọrọ ntụgharị uche, mgbanwe ntụgharị. Nke mbu, odi nkpa inwe otutu ihe omuma banyere ihe omuma, wee me ka ihe omuma nke ihe ndi ayi gha agha iji dozie ya.
Nke a ga - abụ ihe m ga - eme ebe a, ihe mgbaru ọsọ bụ ịghọta nke ahụ itinye ego na nchekwa tumadi pụtara nwee usoro zuru oke.
Atụmatụ itinye ego na ego: Ego ole ka itinye ego na cryptocurrencies?
Atụmatụ ego: Gịnị ka m ga-eji ego m na-etinye na crypto?
Atụmatụ itinye ego na ego: Ebee ka m ga-edebe cryptocurrencies m zụtara?
Ka anyị kwuo na ị bụ onye na-agwa onwe ya oge niile na weebụsaịtị nke mpaghara ahụ, mgbe ị mụsịrị ọtụtụ ihe, ị mechara kpebie ịtọ pasent nke ego ị nwere na nke a.
Ajụjụ mbụ ị ga - aza bụ nke a: kedụ ole? Iji zaa ajụjụ a, anyị kwesịrị ịmata na ọ bụla ego nwere ihe ize ndụ. Ka anyị chee na ihe na-agahie na na Bitcoin na cryptocurrency ilekota na-ada ada n'ụtụtụ echi. Ọ bụrụ na iwe were gị, ị tụba ogwe aka gị na ikuku, mgbe ahụ ị ga-ewe iwe ọzọ wee laghachi na ịme ihe ị na-eme na-enweghị nsogbu ọ bụla, imere ihe oma: lost tufuo ego nke ị ga - akwụ ụgwọ. Onu ogugu mmiri nke idafuru enweghi ike imetu onodu ndu gi dika mbu.
Azịza nye ajụjụ ahụ '' ole '' dị ma na-adabere n'ịdị ize ndụ nke onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike iburu na-enweghị nhụjuanya ọdachi. Nke a bụ ihe mbụ; nchekwa na-ebu ụzọ site na nke a.
Ka anyị gabazie na ajụjụ nke abụọ: ihe ịzụta? Anyị kwesịrị ịghọta otu esi arụ pọtụfoliyo anyị.
Azịza nye ajụjụ a sitere n'echiche bụ isi: oge. Ka ị na-ezube ịnagide n'ahịa ahụ, ị ​​ga-enwekwu mkpa iji wuo obere akpa gị na mkpuchi siri ike ma kwụsie ike, dịka ọmụmaatụ ndị nwere isi ego, dị ka Bitcoin.
N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme naanị arụmọrụ azụmaahịa ma ọ bụ obere oge ị ga-achọ ụfọdụ ihe ọmụma gbasara ọgụgụ na nkọwa nke eserese ahụ. Ọ ga-adị mkpa ka ị nọrọ ebe niile ma soro ọganihu nke akụkọ na mgbanwe nke ọrụ dị iche iche ị nwere mmasị kwa ụbọchị.
Ọtụtụ oge onye na-achụ ego na-enwekarị pọtụfoliyo dị iche iche dabere na oge ikpughe ọ na-ezube ijide. Ọ bụ echiche ziri ezi na nke ịgbasa ego itinye ego. Zụta cryptocurrencies pụtara ijide ha ma ọ bụ ọbụna ịzụ ahịa. Ọ bụghị ma ọ bụ, ma ọnụ.
Kpachara anya ezie! Ọ bụrụ n’inweghị ihe ọmụma miri emi banyere ịzụ ahịa ọ ga-aka mma ka ị chee echiche maka itinye ego n’ime ogologo oge.
Ọbụna na nke a, Otú ọ dị, ọ ga-adị mkpa inwe atụmatụ maka nlekota oru e Pọtụfoliyo rebalancing.
Cazoo! Gwa m banyere atụmatụ ndị ahụ nwere ike ime ka anyị nwekwuo ike itinye ego na itinye ego na ntanetị.
Ọ bụrụ na m chọrọ ịzụta cryptocurrencies, ebee ka m ga-edebe ha? Enwere wallets dị iche iche (obere akpa) enwere ike iji ya mee ihe, na nhọrọ ahụ dịkwa nke onwe ya n'okwu a: ọ dabere na mmata ị nwere na ngwaọrụ dị iche iche.
Buru echiche a dị mkpa n'uche: ị ga - enweta ihe mkpuchi gị naanị ma ọ bụrụ na ị nwere igodo nzuzo (mkpụrụ ahịrịokwu) iji nweta obere akpa ahụ.
B NOTGH YOUR G KE ISI G,, B NOTghị CRYPTO!
Akụkụ a abụghị obere ihe n'ihi na ọ na-egosi na ọ bụrụ na ị debe cryptocurrencies gị na Exchange Exchange ọ bụla ị gaghị enwe igodo nzuzo, kama ọ bụ naanị data iji nweta akaụntụ gị. Yabụ na ị bụghị n'ezie nwe nwe cryptocurrencies ahụ 100%.
Enwere m ike ịdụ gị ọdụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta crypto maka ọrụ ogologo oge, ị ga-enweta nchekwa site na iji obere akpa ngwaike. Ka itinye ego gị n’obere oge, ka ị ga - achọ idobe mkpụrụ ego ndị ahụ maka ojiji, ya mere na Exchange.
Ihe ekwesiri ighota nke oma bu na aghaghi iju echiche nke "nchekwa" na 360 Celsius. Iji obere ngwaike ngwe ngwanrọ dị ezigbo nchebe na ọ dị nso dị mkpa, mana ọ bụrụ na anyị ejupụta ya shitcoin zụrụ n'enweghị akara akara aka kpebiri na mbụ, nke ọma, nke ukwuu.
You chọrọ ịzụta ha na Exchange? Enwere m mmasị na ya Binance, ọ na-emekwa ka m nwee ike ime ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ nenyeghi aha na Exchange a ị nwere ike iji koodu ntinye m mee ya https://www.binance.com/en/register?ref=EV6X8DW5 (Ntuziaka id: EV6X8DW5) na ị ga-enwe 20% ego isslọrụ ozugbo, ruo mgbe ebighị ebi. Ka anyị Rock!
Egekwala ntị ihe onye ọbịbịa na ntanetị ma ọ bụ nwoke na YouTube na-ekwu na Lambo dị ka ndabere. Mee nchọnchọ gị. Dị ka ahịa dị ka cha cha na oge akụkọ ihe mere eme (Mee 2021), atụmatụ ahụ ga-eme mgbanwe.
Dị ka onye mere ego na GameStop, Dogecoin na lọtrị tiketi afọ a, ndụmọdụ ndụmọdụ ego kachasị mma m nwere ike inye gị bụ naanị ịbụ onye nzuzu nzuzu.
Isiokwu bu nke aMetamask: Nzọụkwụ site na ntuziaka na obere akpa kacha mma maka DeFi